आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘पाराडाइम सिफ्ट’ को भूमिका खेल्छौं
नेपाल लिमिटेड निजीक्षेत्रबाट पहिलोपटक पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्ने गरी इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको छ । कम्पनीमा उद्योगी, पूर्वप्रशासक, बैङ्कर र गैरआवासीय नेपालीको समेत संलग्नता छ । यसले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुसार काम गर्ने गरी तयारी थालेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको तयारी थालेको कम्पनीले लगानीबाहेक पूर्वाधार क्षेत्रको ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा पनि काम गर्ने जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष लालमणि जोशीसँग कम्पनीको उद्देश्य, लगानीका प्राथमिक क्षेत्र, सञ्चालनको तयारीलगायत विषयस“ग सम्बन्धित रहेर अभियान दैनिकका गुञ्जबहादुर खड्का र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
इमर्जिक नेपालको मुख्य उद्देश्य के हो ?
यो संस्था लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको कम्पनी हो । देशको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न यो संस्था केन्द्रित छ । यो विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, परामर्श दिने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी गत साउन ३२ गते कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो । कम्पनीलाई हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा सरकारको ५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, प्रशासक, बैङ्कर्स, गैरआवासीय नेपालीलगायतको पनि संलग्नता छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका छौं । यो अवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, चुक्ता पूँजी भने १० करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पूँजी जम्मा गरेर काम गर्ने तयारीमा थियौं, तर अहिलेको अवस्थाले प्रभावित भएको छ ।
कम्पनीको प्राथमिकता के छन् ? यसका उद्देश्य के हुन् ?
हाम्रो प्राथमिकता दु्रत मार्ग, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल र सडकका साथै जलविद्युत् निर्माण र रुग्ण उद्योग सञ्चालन रहेका छन् । त्यस्तै, पूर्वाधारसम्बन्धी वित्तीय संस्थामा लगानी गरिनेछ । उदाहरणका लागि पूर्वाधार बैङ्कमा लगानी गर्न सकिन्छ । खानी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट कर्जा लिने र लगानी गर्ने एवम् त्यस्ता संस्थासँग मिलेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । पूर्वाधारसम्बन्धी तालीम दिने, गोष्ठी गर्ने र थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा पनि यस कम्पनीलाई विकास गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । आफैले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गरेका संस्थामा पनि लगानी गर्ने तथा चाहिएको परामर्श दिने र आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैङ्कको अनुमति लिएर बण्ड र डिबेञ्चर पनि जारी गर्ने उद्देश्य राखेका छौं ।
त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा हबका रूपमा विकास गर्न हामीले काम गर्नेछौं । सरकारका घाटामा सञ्चालन भइरहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द भइसकेका उद्योगमा पनि सरकारको अनुमति लिएर लगानी र सञ्चालन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ ।
त्यस्तै, यस कम्पनीमार्फत वास्तविक सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछौं । नेपाल सरकारको पनि यस संस्थामा लगानी भएकाले यस कम्पनीप्रति स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले विश्वास गरी लगानी आउने सम्भावना छ ।
कम्पनी सञ्चालनको जिम्माचाहिँ निजीक्षेत्रले लिने गरी संरचना बनाइएको छ । त्यसले पूर्वाधार निर्माणमा सहजता हुने हाम्रो विश्वास छ । साथै, समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी काम गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्यतः देश विकासमा सहयोग पुर्‍याउने नै यसको ध्येय रहेको छ ।
एकातिर थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने र अर्कोतिर देशविदेशबाट लगानी ल्याएर पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने बताउनुभयो । यी दुई विषयलाई समन्वय गरी संस्था सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संस्था सञ्चालन प्रक्रियाबारे अझै छलफल नै भइरहेको छ । यसमा विस्तृत छलफल गर्ने क्रममै छौं । कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना आफैले सञ्चालन गर्न आफ्नै जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, थिङ ट्याङ्कका लागि स्वदेशी विदेशीविज्ञ परामर्शदाता राखेर काम लिन सकिन्छ । त्यसरी राखिएको जनशक्ति अल्पकालीन वा दीर्घकानलीन दुवै हुन सक्छ ।
विदेशी संस्थासँग समन्वय गरेर पनि सहयोग लिन सक्छौं । त्यसरी पनि अध्ययन र परामर्श दिन सक्छौं । यो कम्पनीले पूँजी, जनशक्ति वा विविध कारणले रोकिएका संस्थाको खोजी गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने काम गर्नेछ । यसले एकातिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सुधार गर्ने र अर्कोतिर आफैले लगानी गरेर सुधार ल्याउने गर्न सक्छ ।
जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ ?
हामीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि माग गरिरहेका छौं । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बुझेको, अन्तरराष्ट्रिय अनुभव पनि भएको मानिसको खोजीमा छौं । हामी आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रमा विज्ञता प्राप्त व्यक्तिलाई लिएर नै काम गर्ने तयारीमा छौं । त्यस्ता व्यक्तिलाई माथिल्लो श्रेणीमा राख्नेछौं । अर्कोतिर आयोजनाका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिने हाम्रो तयारी छ । यसमा स्वदेशी विदेशी वा संस्थाको पनि सहयोग लिनेछौं ।
कम्पनीमा प्रशासकदेखि बैङ्कर्ससम्म र उद्यमीदेखि गैरआवासीय नेपालीसम्मको संलग्नता देखाउनुभयो । यी फरक क्षेत्र र पृष्ठभूमिलाई मिलाएर लान सहज होला ?
हुन्छ, निजी र सरकारी क्षेत्रको पनि उद्देश्य मिल्छ । सरकारले मात्र पनि सबै काम गर्न नसक्ने, निजीक्षत्रले मात्र पनि सम्भव नहुने संसारभरसबैले स्वीकारिसकेका छन् । खुला अर्थतन्त्रमा पनि सबै पक्षको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । हामीले पनि निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा कुनै पनि आयोजना सहज रूपले समयमा र लगानीको हिसावले पनि उपयुक्त र प्रभावकारी रूपले हुन सक्ने देखिएको छ । यो संसारभर नै प्रचलित छ र यसैअनुसार अगाडि बढ्न खोजिहरेका हौं । अहिलेको नाकाबन्दी र जनशक्ति छनोटको प्रक्रियाले पनि केही ढिलो भएको छ । हामी चाँडै नै काम शुरू गर्छौं ।
कहिलेसम्म कम्पनी सञ्चालनमा आउनेछ ?
यो वर्षभित्रमा हामी सञ्चालनमा ल्याउछौं । असारसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ ।
पीपीए मोडलमा काम गर्छौ भन्नुभयो । संसारभर सफल भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म एउटै आयोजना यो मोडलमा सफल भएको उदाहरण छैन । नेपालका लागि असफल सावित यो मोडल सफल होला र ?
तपार्इंले भनेको सही हो । पीपीए मोडलमा जाने भनेर हामीले धेरै पहिला भनेका हौं । तर, कसरी जाने भन्ने नै थिएन । पीपीए मोडलको नीति भर्खरै (कात्तिकमा) मत्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । यसमा केही स्पष्टता देखाइएको छ । नीतिगत रूपमा बाटो देखाएकाले हामी त्यही बाटोलाई अँगालेर हिँड्ने हो । अर्को समस्या भनेको अस्थिर सरकार पनि हो । जब कुनै आयोजनामा पीपीए मोडलमा जाने तयारी हुन्छ, त्यही बेला सरकार परिवर्तन हुन्छ । यसले पनि समस्या बनाएको छ । सरकारको अहिले जुन काम गर्ने शैली छ, त्यो ज्यादै समय खपत गर्ने खालको र अस्पष्ट रहेको छ । त्यसैले निर्णय समयमा नहुँदा पनि अन्योल भएको थियो । यसले पनि आयोजना अगाडि बढाउन समस्या थियो । त्यो अब हटेको छ । अब यो मोडलमा काम गर्ने धेरै कम्पनी आउने सम्भावना देखिएको छ ।
नेपालमा पीपीए मोडलमा सफल भएको आयोजना यो हो भनेर देखाउने हो भने त्यस्तै आयोजना नै छैन ? यसको ‘रोल मोडल’ नहुनु पनि समस्या होइन र ?
सही हो, अहिलेसम्म छैन । तर, त्यसरी नदेखिए पनि काठमाडौंमा बनेका केही भवन (टावर)हरू त्यसै मोडलका रूपमा लिन भने सकिन्छ । किनकि, त्यस्ता भवनले जग्गा सरकारी छ । निश्चित समयका लागि सरकारले लिज मा दिएको छ । अनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेर काम गरिरहेको छ । यो पनि पीपीए मोडल नै हो । हाम्रो कम्पनीले पनि गर्न खोजेको त्यस्तै हो । उदाहरणका लागि वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा खाली छ । त्यसमा कुनै सूचना प्रविधि कलेज वा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने त्यो उपलब्धिमूलक हुनेछ । त्यस्तै, हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द छ । औषधि लिमिडेड समस्यामा छ । त्यस्तो क्षेत्रमा केही न केही काम गरेर देखाउने भनेरै लागेका छौं । वाणिज्य, उद्योग वा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा पनि सबै सकारात्मक नै छन् । तर, यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ । त्यो ठाउँमा यस्तो कामप्रति सकारात्मक सोच राख्ने मानिस भयो भने सजिलो हुन्छ ।
हाम्रा पूर्वाधार आयोजना सफल नहुनुमा नीति नियममात्र होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिने मानिसमा हुने अस्थिरता पनि हो भनिन्छ । तपाईको अनुभवमा यो सही हो ?
हो, सरकारमात्र होइन, प्रहरी, प्रशासनतन्त्र, शिक्षकसम्म राजनीति हाबी भएको छ । यसरी चल्दैन भन्ने होस नेताहरूमा पनि आइसकेको छ । जहाँ प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ, त्यहाँ पार्टीको कार्यकर्ता लगेर काम हुँदैन भन्ने बुझिसकिएको छ । अहिले कुनै पनि संस्था आफ्नो क्षमतामा चल्ल नसक्नुमा उचित मान्छे उचित ठाउँमा नहुनु नै हो । पहिला राजनीति सबै हो भनिन्थ्यो । अब आर्थिक समृद्धि सबै हो भन्ने अवस्था आएको छ । भाषणले मात्र नहुने कुरामा धेरै क्षेत्र सहमत भएको छ । हामीले स्थापना गरेको संस्थााले यसका लागि पनि दबाब सृजना गर्नेछ । ‘पाराडाइम सिफ्ट’का लागि भूमिका खेल्नेछ ।
भारतमा निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दा काम सहज हुने कुरा देखिएको छ । अहिले ठूला ठूला सडक, रेलमार्ग, टनेल निजीक्षेत्रको सहकार्यमा भइरहेका छन् । यसले पनि आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण हुनै पर्नैमा हाम्रो सबै क्षेत्रको नेतृत्व पुग्न लागेको छ ।
भनेपछि केही व्यक्तिले भन्ने गरेका ‘नेपालमा पीपीए मोडल असफल’ भन्ने कुरा अब गलत सावित हुनेछ ?
अवश्य पनि । यो प्रमाणित गर्नुपर्ने नै छैन । संसारभर सफल भएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यसैले पनि यहाँ प्रभावकारी बनाउन मात्र आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवमा संस्थानलाई निजीकरण गर्ने भन्यौ, गरियो पनि तर केही हुन सकेन । त्यसैले सरकारले मात्र राख्दा पनि बोझ हुने रहेछ । अनि निजीकरण गर्दा पनि प्रतिफल नदिएको देखियो । विभिन्न समस्या देखिए । यसकारण पनि पीपीए मोडलमा जा“दा एकातिर संस्थाको पनि हित हुने अर्कोतिर देशलाई पनि फाइदा पुग्ने देखियो । आर्थिक विकास हुने मोडल हुने यही हुने देखियो । हाम्रो संस्था पनि यसैलाई लिएर काम गर्नेछ ।
तपाईंको संस्थाले धेरै उद्देश्य राखेको छ । सबै काम गर्छुभन्दा केही पनि नगर्ने सम्भावना त हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै पूर्वाधार आयोजना निर्माण, सञ्चालन, परामर्श नै हो । तर, आयोजना गर्दा शुरूमा जलविद्युत् हुन सक्छ, सडक वा सुरुङमार्ग पनि हुन सक्छ । कम्पनीको उद्देश्य फेरिरहन पनि त सकिँदैन । हामीले अहिले नै सोचेकोचाहिँ जलविद्युत्, रुग्ण उद्योगको सञ्चालन र सडक रहेको छ । उदेश्य वृहत् भए पनि काम क्षेत्र विशेष नै हुन्छ । हामीले केही क्षेत्रमा काम गरेर देखाएपछि मात्र विश्वसनियता आउने भएकाले पनि केही गरेर देखाउने हाम्रो तयारी छ ।
जलविद्युत्, रुग्ण उद्योगको सञ्चालन र सडकसम्बन्धी कुनै आयोजना शुरू गरिहाल्ने तयारी छ ?
अहिले नै त्यस्तो योजना छैन । रुग्ण उद्योगका लागि गयौं भने सरकारको लामो प्रक्रियाले गर्दा त्यहीँ हराउने सम्भावना पनि छ । पहिलेचाहिँ जलविद्युत् वा अन्य कुनै आयोजनामा केही काम देखाइहाल्ने सोचाइमा छौं । रुग्ण भएको नेपाल औषधी लिमेटेडमा केही गर्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं । पहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने र त्यसपछि मात्र काम शुरू गर्नेछौं ।
कम्पनीमा निजी उद्यमी व्यवसायीको उच्च संलग्नता देखिन्छ । गोदाम घर निर्माण गर्ने योजना छ कि ?
हो, त्यसबारे पनि हामीले सोचिरहेका छौं । त्यति मात्र हैन । चिस्यान केन्द्र, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्रलगायत पनि निर्माण गर्न सक्नेछौं । त्यस्तै, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको पनि सम्भावना छ । हामीसँग पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्र असङ्ख्य छन् । अदुवा, दूधलगायत उत्पादनका लागि पनि पूर्वाधार आवश्यक देखिएको छ ।
हामीसँग पूर्वाधार निर्माणका तमाम क्षेत्र छन् । लगानी नहुनु वा आउन नसक्नु समस्याका रूपमा लिइएको छ । इमर्जिङ नेपालले कसरी लगानी ल्याउन सक्छ ?
रकमको अभाव छैन । भारतीय, चाइनिज, यूरोपियन लगानी गर्न चाहन्छन । हामीले काम गर्न नसकेको कारण लगानी नआएको हो । हामी जब काम गर्न थाल्छौं लगानीको अभाव हुँदैन । भेटघाटमा पनि लगानी गर्ने इच्छा देखाइरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति पनि सक्षम हुँदै गएको छ । कतिपय अन्तरराष्ट्रिय पूर्वाधार आयोजनामा नेपालीको संलग्नताले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । हाम्रो अस्थिर राजनीति नै लगानीको बाधक हो ।
पूर्वाधार बैङ्क स्थापनाको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
यसको लागि पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले संयोजन गरिरहनु भएको छ । यो बैङ्क स्थापनाको लागि १४ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रबाट लगानी जुटिसकेको छ । पूर्वाधार बैङ्कमा पनि यो कम्पनीको लगानी छ । यसले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । यस्ता संस्थाको आगमनले सरकारी क्षेत्र पनि काम गर्न घचघच्याउने छ । यसले सरकारको धारणा पनि परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।